Qisada: Soomaali Afduub Lagu Eedeeyey Oo Kanada La Geeyey, Kaddib Markii Lagu Khiyaameeyey Heshiis Been Ah – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Kamaal A. Cali (Q. 3aad)
Cali Cumar Adeer
Kulankan oo laba saacadood socday, Intaas oo keliya Cali lagalama hadlin, balse sarkaalka booliiska dharcadda ah ee ‘Chris’ waxa kale oo uu kala sheekaystay suurtagalnimada in mustaqbalka ay galaan heshiisyo buugaag kale oo uu qoro Cali iyo weliba in filim dhukumanteri ah ay ka sameeyaan qisada afduubkii Amanda Lindhout.
Markii wadaxajoodka mucdiisii dhammaatay, dhammaan qodobbadii heshiiskana la isla gartay, ayaa intii aanay Cali iyo Chris (Sarkaalkii dharcadda ahaa ee iska dhigayey masuulka shirkadda daabacista), saxeexin heshiiska. Chris waxa uu Cali u sheegay in uu ku faraxsan yahay heshiiskan iyo in ay daabacaan buuggan, laakiin warwarka ugu weyn ee tan iyo bilowgiiba ay shirkaddiisu qabtay uu yahay kaalinta uu Cali ku lahaa afduubkii labada warfidiyeen. Waxa uu sheegay in haddii warkaasi soo baxo, ay khatar ku tahay sumcadda shirkaddiisa.
Chris waxa uu Cali ka dalbaday bal in uu si faahfaahsan ugu sharraxo kaalinta runta ah ee uu ku lahaa afduubkaas. Taas oo uu ku andacooday in ay ka caawin doonto in imika ay shirkaddiisu ka diyaargarowdo ceeb kasta oo kaga iman karta kaalinta uu Cali ka qaatay afduubkaas. Isla markaana ay imika u sii diyaarsan doonaan waxa ay isku difaacayaan.
In Chris uu su’aashan Cali weydiiyaa waxa ay ahayd arrin hore u sii diyaarsan. Waa isku daygii ugu dambeeyey ee uu booliiska Kanada ku doonayey in uu Cali kala baxo hadallo marag ku noqon kara marka ay maxkamadda geeyaan.
Intii aanu kulanku bilaabmin waxaa isku sii yara horreeyey Cali iyo AK, oo isla eegay arrimaha ay kala hadlayaan ‘Chris’ iyo sida oo kale jawaabaha habboon ee ay tahay in ay u diyaarsadaan su’aalaha kuwani ka midka yihiin ee Chris weydiin karo. “Soo diyaar uma tihid in aad xiise geliso masuulka shirkadda daabacaadda” ayaa uu AK ku yidh Cali, ilbidhiqsiyo ka hor intii aanu qolka soo gelin Chris. Fiidyoow ay kamaradaha qolka ku qarsoonaa ka duubeen kulankan, oo maxkamadda la horkeenay ayaa laga arkayey AK oo Cali ku dhiirigelinaya in marka kulanku bilowdo uu ku dadaalo sidii uu xiise iyo xamaasad ugu abuuri lahaa masuulka shirkadda daabicista ee u soo socda, si uu ugu qanco heshiiska.
Waxa ay ahayd xeelad kale oo la doonayey in Cali uu furfurmo oo isaga oo is leh yaanu heshiiskani kaa fashilmin, uu ku qasbanaado in uu wax badan oo uu qarin lahaa sheego. “Waa heshiis aad u weyn. Shan sano ayaa ay innagu qaadatay in aynu halkan soo gaadhsiinno” ayaa uu AK ku odhanayaa Cali.
Isla cajaladda maxkamadda lagu soo bandhigay waxaa laga daawaday AK oo markii uu kulanku bilowday hadalka furaya isaga oo isbaraya Chris iyo Cali, weliba isaga oo si uu kalsooni ugu abuuro Cali aad u ammaanaya. Markii uu agaasimaha shirkadda daabicista ee beenta ahaa soo galay qolka ayaa AK inta uu ku jeestay Cali oo dhoolla caddaynaya waxa uu Chris ku yidhi, “Waa kan xiddigaygii, Cali”
Qodob ka mid ah heshiiskan oo uu Chris aad u sharraxay, ayaa ahaa ka sirta ugu weyni ku jirto. Waxa uu qodobkani dhigayey in Cali Cumar Adeer laga rabo in uu sheego xog kasta oo haddii dib ay ka soo baxdo, sumcad darro ku keeni karta shirkadda daabicista iyo guud ahaan heshiiska, ama uu ka dhalan karo qalad sharci in lagu qaado isaga ama shirkadda daabicista. “Waxa aynu u fadhinaa waa heshiis, ay wadartiisa guud ku kacayso lacag dhan hal milyan oo doolarka Maraykanka ah, ma fahmaysaa?” ayaa uu AK ku yidhi Cali, isaga oo u sharraxaya sida ay waajib u tahay in uu ka fikiro si kasta oo shirkaddiisa iyo ta daabicistaba looga ilaalin karo sumcad darro iyo gef sharci. AK waa uu ku sii socday dadaalkii uu doonayey in uu Cali ku riixo in uu ka warramo xaqiiqada sheekada afduubka ee Soomaaliya ka dhacday. Isaga oo ereyadiisa dhiirrigelinta ah sii wada ayaa uu yidhi, “Waxa aynu joognaa fursaddii ugu dambaysay, ee haddii aad Chris runta uga sheegto saamayntii iyo gacantii aad ku lahady afduubka, ay taasi ka caawin doonto in uu imika sii diyaarsado hubkii sharci ee uu isku difaaci lahaa, isuna diyaariyo in uu adiga iyo shirkaddiisaba idinka ilaaliyo dacwad la idinku soo oogo, marka ay soo baxdo in ninka buugga qoray uu qisadaas afduubka xidhiidh la leeyahay” AK ayaa hadalka mar kale ku sii adkeeyey, “Waxa ay ka hadlayaan, ee ay doonayaan in ay ogaadaan waa xidhiidhka aynu la leenahay dhacdadii Amanda”
Cajaladda maxkamadda lagu soo bandhigay, ayaa laga arkayaa Cali oo inta uu hadalladan u soo dabco, si aad u faahfaahsan u sharraxaya dhacdadii afduubka iyo kaalinta uu ku lahaa. Waxa uu sheegayaa in isaga oo maqaaxi Muqdisho ku taalla fadhiya, uu taleefanka kala soo hadlay nin ay isgaranayaan oo ballan ka doonaya, isaga oo u sheegay in uu shaqo u hayo.
Daqiiqado yar kaddib, ayaa uu ninkaasi u yimi, una sheegay in rag uu garanayaa ay afduubeen dad shisheeye ah, oo uu doonayaan ruux u kala turjuma. Waxa uu Cali sheegay in ninkaasi u sheegay in haddii uu u kala afceliyo afduubeyaasha iyo lahaystayaasha, ay abaalmarintiisu noqon doonto in uu la qaybsado lacagta madaxfurashada ah ee dadkan laga qaadi doono. Cali waxa uu qirtay in uu heshiiskaas ogolaaday. Inta uu Cali hadlayey waxaa dhowr jeer laga dareemay in uu xogta badh qarinayo, marar badanna hadalka dib u celinayo, mararka qaarkoodna xogo is burinaya ayaa uu sheegayaa.
Cali waxa uu mar kale sheegayaa in saddexdii bilood ee u horreeyey oo keliya uu xidhiidh la’ lahaa lahaystayaasha. Sidaa awgeed aanu wax war ah ka haynin in Amanda Lindhout la jidh dilay iyo in la kufsaday midna. Waxa uu sheegay in markii uu dhexdhexaadiyey afduubayaasha iyo la haystayaasha ee lacagtii madaxfurashada la soo diray, in aanay afduubayaashu siinin lacagtii uu filyay. Toban kun oo doolar oo keliya in ay siiyeen ayaa uu sheegay, lacagtaas oo uu sheegay in ay aad ugu yarayd, marka la eego hawsha uu u qabtay. “Lacag intaas ka badan ayaa aan ka filayey” ayaa uu Cali Cumar ku yidhi labada sarkaal ee booliiska Kanada ka socday ee isugu sheegay AK iyo Chris.
Ugu dambayntii markii labada sarkaal ay arkeen in Cali uu sheegay wixii uu sheegi lahaa oo dhan, ayaa ay hordhigeen heshiiskii daabicista buugga ee beenta ahaa oo uu saxeexay.
Markii shirkoodii dhammaadayna, Cali waxaa kadinka ku sugayey saraakiil ka tirsan booliiska dalka Kanada oo labbisan, halkaas ayaana ay ku qabteen, oo ay xabsiga u taxaabeen.
Juun 11, 2015 kii: ayaa ay ahayd markii Cali si rasmi ah xabsiga loogu taxaabay. Xeerilaalinta Kanada ayaa ku soo oogtay dacwad ah in uu meel ka baxsan dalka Kanada ku afduub muwaadin u dhashay Kanada. Waxa aana xukunkiisa loo adeegsaday xeer ciqaabeedka Kanada oo ogol in maxkamadaheedu ay qaadi karaan dembiyada la xidhiidha arrimaha bani’aadamka ama muwaadiniintooda khuseeya, xitaa haddii ay ka dhacaan meelo ka baxsan xuduudaha Kanada. Xeerilaalintu waxa ay dacwaddeeda ku salaysay xogta uu booliisku ka ururiyey Cali oo isugu jirta qoraal iyo muuqaallo fiidyow ah. Kaalinta ay xeer ilaalintu u aqoonsatay in Cali uu dembiga dhacay ku lahaana, waa in uu masuul ka ahaa hawsha dhexdhexaadinta Afduubayaasha iyo qoysaska la haystayaasha, iyo in uu ahaa ruuxa u kala afcelinayey labada dhinac, taleefanka lagu xidhiidhayana isagu hayey. Waxa dacwadda lagu xusay in intii wada xaajoodka madaxfurashadu socday si cad ay u muuqatay in uu Cali kaalin masuuliyadeed iyo hoggamaineed ku lahaa isuduwidda iyo maamulka dembiga dhacay.
Si kastaba ha ahaato ee eeddaas Cali si adag ayaa uu u diiday. Waxa uu maxkamadda horteeda kaga dooday in aanu kiiskan qabin. Laakiin waxa uu ku dacwiyey war ka duwan kii uu marka hore u sheegay saraakiishii booliiska ee u dhuuntay. Cali waxa uu mar kale ku dooday in uu isaga qudhiisu afduubnaa. Waxa uu sheegay in isaga oo shaqadiisa fasax kaga jira ay kooxda afduubku suuqa ka qafaalatay, kuna qasbeen in uu hawshan dhexdhexaadinta iyo turjumaadda ka caawiyo. “Muddo toddoba bilood ah ayaa ay afduub igu haysteen, iyaga ayaana madaxa qori igaga hayey marka aan wadaxaajoodka ku jiro, oo igu qasbayey waxa aan ku odhanayo qoysaska la haystayaasha” ayaa uu ku dooday. Waxa uu ku dacwooday in isaga qudhiisa la garaacay. Iyo in mar uu ka baxsaday kooxda, inta ay u weydaarteen qoyskiisa ay afduub u qabsadeen, uguna hanjabeen haddii aanu ku soo noqon in ay dili doonaan xubnaha qoyska.
Cali waxa kale oo uu maxkamadda u sheegay in xiisaha uu u qabay daabicista buugga iyo dhammaystirka heshiiskani ay ku kalliftay in uu been sheego oo uu iska dhigo nin ku lug lahaa hawsha afduubka. Inkasta oo qareenka difaacaya Cali laftiisu maxkamadda ka hor qiray in hadalkan dambe ee uu Cali jeediyey uu burinayo hadalkii uu hore uga hor yidhi maxkamadda ama isaga oo duuban la keenay.
Trevor Brown, oo isna ka mid ah qareennada Cali Cumar ayaa maxkamadda horteeda kaga dooday suurtagalnimada in Cali la afduubay isaga oo ka sheekeeyey xaaladda ay Soomaaliya ku sugnayd sannadkii 2009 ka oo ahayd xaalad wax kastaa suurtagal ahaayeen. Dhinaca kalana Dacwad oogaha oo magaciisu ahaa Croft Michaelson, ayaa isagu arrintan kaga jawaabay in Cali Cumar Adeer uu beeno aan islahayn isku tolayo. Waxa hadallada uu maxkamadda ka dhex yidhi Croft Michaelson ka mid ahaa, “Ma jirto sabab ku kallifta in uu iska sheegto been ah in uu ku lug lahaa afduubka. Waayo, xitaa ma’ uu jirin wax uu ismoodsiin karo in uu beentaas ka faa’iidayo”
Amanda Linhout iyo Nigel Brennan waa ay mar isku dayeen in ay ka baxsadaan gacanta afduubayaasha. Waxa ay ahayd markii ay shan bilood oo keliya gacanta ugu jireen. Amenda iyo Nigel waa ay ku guulaysteen wejigii hore ee baxsashada. Nigel Brennan oo arrintaas ka warramaya ayaa sheegay in inkasta oo ay laba qol oo isku dheggen ku kala xidhnaayeen, haddana ay isku dayi jireen in ay xidhiidhaan. Tusaale ahaan, waxa uu sheegay in gidaarka ay isu garaaci jireen iyo in suuliga oo mid keliyi ka dhexeeyo ay calaamado afgarasho ah oo aan la fahmayn isu dhigi jireen.
Nigel oo 45 jir ahi waxa uu sheegay in ay ku guulaysteen in qolka ay dalooliyaan oo midhadh jaajuur ah inta ay ka saareen ay halkaas ka dhacaan, kaddibna isku dayaan in ay baxsadaan, laakiin ay ku fashilmeen. Waxa ay galeen masaajid ku yaallay meel aan ka fogeyn guriga ay ku xidhnaayeen, laakin si dhaqso ah ayaa loo ogaaday baxsigooda, dib ayaana loo soo qabtay. Intaa wixii ka dambaysay illaa markii la sii deynayey silsilado ayaa lagu xidhi jiray si aanay mar dambe u baxsan.
Marka kale waxa ay Amanda sheegtay in ay ku sigatay in ay kelideed ku hadho gacanta afduubayaasha, laakiin uu Nigel Brennan diiday in uu kelideed kaga tago. Waxa ay ahayd markii qoyska Nigel uu soo bixiyey lacagtii kaga soo hagaagtay madaxfurashada, laakiin ay Amanda hooyadeed awoodi kari weyday in ay sidaa dhaqsaha ah u bixiso.
Amanda hooyadeed waxa ay ka shaqayn jirtay moofo, aabaheedna waxa uu ahaa naafo aan ka kicis lahayn. Sidaa awgeed qoyskoodu waa uu awoodi kari waayey in uu sidaa dhaqsaha ah u soo bixiyo lacag dhan 300 oo kun oo doolarka Maraykanka ah. Haddii ay dawladda ka codsan lahaayeen in laga caawiyo bixinta madaxfurashada lagu soo deynayo muwaadinaddan qoyskeedu faqiirka yihiin, ceebta taagani waxa ay ahayd in sharciga dalka Kanada aanu ogolayn in madaxfurasho la bixiyo.
Arrintani waxa ay Amanda Lindhout ku ridday quus, ay gaadhay in ay afduubayaasha ka dalbato in ay dilaan. Laakliin Cali Cumar ayaa u sheegay in aanay dilayn. In kasta oo ay sheegtay in mar uu si hanjabaad ah ugu yidhi, “In aad dhimato diyaar ma u tahay?” haddana waxa ay sheegtay in uu u caddeeyey in aanu dilayn. Taas beddelkeedana waxa uu ku celcelin jiray in uu doonayo in uu guursado. La soco qaybta u dambaysa iyo cadadka dambe…